Ungazi kanjani ukuthi ngine-frenulum emfushane | Amadoda anesitayela
U-Alicia tomero | 31/10/2021 10:08 | Ukunakekelwa komuntu siqu, Izithandani Nezocansi
Amadoda amaningi noma intsha uhlushwa i-frenulum emfushane ngaphandle kwesiqiniseko sokwazi ukuthi bangakwazi yini ukuzilungisa bona. Kwabanye kuyimfihlakalo ukwazi ukuthi bane-frenulum emfushane, abafana abaningi bayafika eminyakeni yokuvuthwa nokungabaza, namanye amadoda aseneminyaka eyifihla inkinga yawo engazi ukuthi enzenjani.
Kuye ngezinga elikhona, kungase kudinge yokwelashwa okuncane. Ezimweni eziningi zalezi zimo, ixazululwa lapho izingane zisencane futhi zidinga kuphela uhlobo oluthile lukakhilimu lokho kusiza ukuhoxisa isikhumba ukuze sinikeze kancane kancane. Kodwa kwezinye izimo ezithuthuke kakhulu kuyodingeka ukuhlinzwa.
1 Ngazi kanjani uma ngine-frenulum emfushane?
2 Kungani kwenzeka i-frenulum emfushane?
3 Yiziphi izimpawu ezingase zivele
4 Ukwelashwa kwe-frenulum emfushane
5 Kuyoba njani ukuziphendukela kwayo?
Ngazi kanjani uma ngine-frenulum emfushane?
Okokuqala ukwazi uma uhlushwa i-frenulum emfushane noma kungolunye uhlobo inkinga efana ne-phimosis. Isikhumba esizungeza ipipi kumele kube yisona esilawula ukuhlanganisa ubuso bangaphakathi bejwabu nalolo lweglans futhi lokhu kwenziwa ngokugoqa okusiza ukwelula nokufinyela.
Uma lokhu kugoqa noma i-frenulum kukufushane kakhulu yenza lokhu kunyakaza kungenzeki noma kwenza kube nzima kakhulu, lapho uma kukhulunywa ngokuqhanyelwa uzoba nobunzima ngakho-ke ngeke ukwazi ukuya ocansini. Uma i-frenulum imfushane noma inganwebekanga kakhulu ngeke ivumele i-glans ukuthi ihlehle ngokuphelele, futhi ingabonakala kuphela lapho umthondo usuzophakama.
Kungani kwenzeka i-frenulum emfushane?
Imbangela enkulu yile lapho kwenzeka i-phimosis. I-Phimosis yilapho imbobo yejwabu incane kakhulu, incane, noma inganwebekanga kakhulu ukuvimbela i-glans ukuthi ingaphumi. Kuzokwenziwa umzamo wokuhlehlisa isikhumba emuva futhi kuzoba nobunzima obuningi, ngakho awukwazi ukuqhanyelwa, kodwa ungachama ngokuphelele. Leli qiniso lingase lihlotshaniswe ne-frenulum emfushane.
Ezinye izimbangela kungase kube imvelaphi yofuzo, lapho uzalwa khona ukhule nalokhu okuxakile. Kodwa ngezinye izikhathi kungase kube lapho izifo zesitho sangasese (ukuvuvukala noma i-fibrosis) lapho kube nokushuba kwezicubu ze-frenulum.
Amanye amadoda, kanye nezingane noma intsha kungenzeka babe nayo izinyembezi ze-frenulum futhi phakathi nokuphulukiswa kwalo selaphe kabi. Kwezinye zalezi zikhathi i-frenulum selikhubazekile noma libe mfushane.
Yiziphi izimpawu ezingase zivele
Kuningi ukungaphatheki kahle okungenzeka ngenxa yokuba ne-frenulum emfushane. Okokuqala ukuzama ukuhlehlisa isikhumba ngomzamo wokuya ocansini noma ukushaya indlwabu, kanjalo izobangela ubuhlungu.
Kweminye yale mizamo, ungase uzame ukugcina ubuhlobo ngokufinyelela ukwehla izinyembezi, ngakho-ke kufanele iboshwe. Kwezinye izimo umzamo unjalo ukuthi ngisho umthondo ugobile,ikhanda lomthondo ligobela eceleni.
Ngisho nayo yonke imizamo ebingase ifinyelele esiphethweni esihle, uma ingaphumelelanga, kungenzeka ukuthi yenzeka ukucasuka okuningi nokuluma okukhulu endaweni ngaphambi komzamo onjalo.
Ukwelashwa kwe-frenulum emfushane
Ukwelashwa okungcono kakhulu futhi okuphumelelayo kakhulu ukungenelela kokuhlinzwa. Ayinazinkinga ezinkulu futhi iyashesha, ilula futhi kulula ukuyelapha. Kuzokwenziwa ngaphansi kwe-anesthesia yendawo futhi ngesisekelo sokulaliswa esibhedlela, ngaphandle kokulaliswa. I-frenectomy iqukethe ukusika okuncane noma ukusika nge-scalpel endaweni ye-frenulum, ukuze ingasakhiqizi ukungezwani esicutshini noma esikhunjeni esincike kuso. Khona-ke izithungo ezimbalwa zizosetshenziswa ngokusetshenziswa kwe-povidone iodine (i-antiseptic) kanye nezingubo zokugqoka ezifakwe ukhilimu wokuphulukisa. Ngenkinga ye phimosis ukusebenza kuhlukile, njengoba sonke isikhumba esizungeze ijwabu sikhishwa ngokuphelele, sishiya ikhanda le-glans livele livele.
Kukhona amadoda ukuthi inkinga ye-frenulum emfushane ingaxazululwa ngezivivinyo ezinwebekayo. Kuqukethe ukwenza ukunyakaza kokuhlehla kwesikhumba sibheke emuva ngokuqina okuthile nokuphindaphinda. Kuzokwenziwa ngaphansi kokuqondisa kodokotela amaviki angu-4-5 futhi ngosizo lwe-corticosteroid-based cream ukuze kuncishiswe ukuvuvukala nokunciphisa izicubu ezijiyile. Uma lokhu kwelashwa kungasebenzi, kuzodingeka ukuthi kuhlinzwe.
Kuyoba njani ukuziphendukela kwayo?
Kubalulekile ukwenza uchungechunge lokunakekelwa kwansuku zonke ekhaya ukuze ukwelapha kulungile. Kufanele uvimbele izifo ukuthi zingenzeki futhi ngenxa yalokhu kuzokwenziwa ukwelashwa kwansuku zonke, ukuhlanza indawo ngensipho namanzi bese kulandela i-povidone iodine. Ngemuva kwalokho, izophinde ihlanganiswe ngezingubo zokugqoka kanye nokhilimu wayo ohambisanayo, ukuphulukiswa okuhle futhi ukuze kungabikho uhlobo lokungqubuzana.
Kunconywa ukuthi ngesikhathi ukwelashwa ukuphulukisa indoda kufanele ugweme ama-erections, njengoba isesikhathini sokuphulukiswa ngakho-ke ingaba buhlungu. Ukwenza ucansi kubalulekile ukulinda kancane ngaphezu kwezinsuku ezingu-15, nakuba kahle, kuze kube amasonto amane.
Indlela ephelele ye-athikili: Amadoda aSitayela » Ukunakekelwa komuntu siqu » Ungazi kanjani ukuthi ngine-frenulum emfushane